Nagarik Shukrabar - ‘सेलिब्रिटी थिएँ, चेलीबेटी भएँ’
शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०६ : ४७
बिहिबार, ०६ जेठ २०७३, ०२ : २७
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको दैनिकी अचेल फेरिएको छ । उनको आफ्नो ‘सेड्युल छैन’, नयाँ शक्ति नेपालको ‘सेड्युल’मा जहाँ पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । उनको लवाइ पनि फेरिएको छ । वानपिस र हाई हिलमा सजिएर हिँड्दिनन्, कुर्तासुरुवालमा पुग्छिन् । खासमा उनको भूमिका फेरिएको छ । अभिनेत्रीबाट उनी नेत्री भएकी छिन् । नयाँ शक्तिकी उनी केन्द्रीय सदस्य हुन् । अहिले संगठन निर्माणका लागि नयाँ शक्तिले खटाएका महŒवपूर्ण १० जनाभित्र उनी पनि छिन् । ‘नव–नेत्री’ करिश्मासँग डिबी खड्काले राजनीति संवाद गरेका छन्ः
जीवनमा यत्रो समय नगरेको के काम राजनीतिमा लागेपछि गर्नुप¥यो ?
ब्यानर बोकेर बाबुरामका पछि बस्नु नयाँ काम भनेर सामाजिक सञ्जालमा तपाईंको मजाक उडाइँदै छ । अहिले नयाँ शक्तिले कुनै नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ ?
मलगायत १० जनालाई पार्टीको संगठन निर्माणको काम लगाइएको छ । यो एक महिना हाम्रो काम पार्टीलाई स्थापित गर्ने र नयाँ सदस्यलाई संगठित गर्ने जिम्मेवारी छ ।